दाङमा थप १५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि « Daily News Bank
दाङ,१४ जेठ ।
दाङमा १५ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । बुधबार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दाङ घोराहीका ७ र लमहीका ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
संक्रमितहरु घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १० का ३ जना, घोराही १८ का ४ जना लमही नगरपालिका वडा नं. १ का १ जना, २ का २ जना, लमही – ४ का १ जना, लमही–५ का तीन जना र लमही–६ का एक जना रहेका प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार कैलास देवले बताए ।
उनिहरु सबै एक महिला सहित १७ वर्षदेखि ३० वर्ष उमेरका रहेको डा. देवकोटाले जानकारी दिए । यो संगै दाङमा संक्रमितको संख्या १८ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने प्रेस ब्रिफिङगरि जानकारी गराउन बाँकी रहेकाे जनाईएको छ ।
यस्तै घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा पूर्वी रुकुममा ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका वडानम्बर १४ मा ३ जना पुरुष र १ महिलामा पनि कोरोना पुष्टि भएको प्रतिष्ठानको बताएकाे छ ।